Ilhaan Cumar Oo Lacag Dhan $150,000 Siisay Ninka Caddaanka Ah Ee Ay Xidhiidhka La Leedahay – somalilandtoday.com
Ilhaan Cumar Oo Lacag Dhan $150,000 Siisay Ninka Caddaanka Ah Ee Ay Xidhiidhka La Leedahay
(SLT-Washington)-Ilhaan Cumar oo ka tirsan Aqalka Wakiilada Mareykanka ayaa lacag ku dhow 150,000 oo dollar oo kale siisay shirkadda uu leeyahay Tim Mynett oo ah ninka caddaanka ah ee la tuhunsan yahay inuu xidhiidhka ka dhaxeeyo, waxaa sidaas weriyey wargeyska New York Post.
Markii uu soo shaac baxay warka ku saabsan in Ilhaan iyo Mynett ay xidhiidh jaceyl leeyihiin, ayaa waxaa ka hor ay Ilhaan siisay shirkadda Mynett lacag dhan 223,000 oo dollar, taasi oo tirada lacagta guud ee ay siisay ka dhigeysa 370,000 oo dollar.
Dadka kasoo horjeeda Ilhaan ayaa ku dooday in lacaghaan ay sharci darro yihiin islamarkaana Ilhaan u siineyso Tim Mynett xidhiidhka ka dhaxeeya dartiis.
Si kastaba hay’adda federaalka ee qaabilsan inay arrintan baadho ayaa sheegtay in ayna sidaas sameyn karin illaa guddiga qaabilsan uu amro in la baadho.
Ilhaan iyo Mynett ayaa hore u beeniyey inay xidhiidh leeyihiin inkasta oo sawirro qarsoodi ah oo laga qaaday ay sidaas muujinayaan.
Ilhaan ayaa bishii October waxay maxkamadda Hennepin County ee Minnesota ka codsatay in laga furo ninkeeda Axmed Xirsi, iyada oo sheegtay in guurkooda uu yahay mid aan dib loo hagaajin karin. Furiinkaas ayaa si rasmi ah loo dhameystiray 5-tii November.
(SLT-Hargeysa)-Waxaa gobolka Sool booqasho ku tegay diblomaasi sare iyo cilmi baadhe u dhashay dalka Maraykanka kana...